CHUAM : hotsaboina ireo mivadi-tongotra | NewsMada
CHUAM : hotsaboina ireo mivadi-tongotra
Mitohy ny fiaraha-miasan’ny Miracle Feet sy ny Fondation Telma miaraka amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana mandray an-tanana ny ankizy mivadi-tongotra amin’ny alalan’ny fomba fitsaboana “Ponseti”. Hanohana ny CHUAM Befelatanana izy ireo manomboka izao ary mandritra ny herintaona ka iantefa amin’ny ankizy mivadi-tongotra latsaky ny 2 taona ny fitsaboana. Telo andro aorian’ny fahaterahana ny fikarakarana voalohany fametrahana ny plâtre. Maharitra fito herinandro ny fitondran’ilay zaza azy. Rehefa esorina ny “plâtre”, manao kiraro manokana vokarin’ny centre d’appareillage eo Befeletanana ilay zaza hanohizana ny fitsaboana. “Rehefa manomboka mandeha izy, afaka manao kiraro tsotra mahazatra toy ny ankizy rehetra amin’ny antoandro, fa soloina ilay kiraro manokana kosa amin’ny alina. Dimy taona ny faharetan’ny fitsaboana ho tomombana ny fiverenan’ny tongotra amin’ny laoniny”, hoy ny tale teknika ao amin’ny CHUAM Befelatanana, dokotera Randriamampianina Irène, omaly teny amin’ny hopitalin’Itaosy.
Tsy maharitra ny ray aman-dreny
Nanomboka ny taona 2012, antony voalohany na faharoa hanatonan’ny olona ny CHUAM ny mivadi-tongotra. 146 ny ankizy noraisiny an-tanana ny taona 2017. Nandritra ny dimy volana voalohany amin’ity taona ity kosa, 68 ny zaza mivadi-tongotra notsaboina. “Ny fitaovana rehetra ampiasaina amin’ny fitsaboana no iantohan’ny roa tonta fa ny saran’ny fivezivezena mitondra ny zaza eny amin’ny hopitaly manao ny fikarakarana rehetra anjaran’ny ray aman-dreny, ao anatin’ny tetikasa “Pied bot”. Indraindray tsy maharitra hatramin’ny farany ny ray aman-dreny amin’ny fitsaboana”, hoy ny mpiandraikitra ny Miracle Feet, Rabendrainy Sendra. Tao anatin’ny 11 volana niasan’ny Miracle Feet sy ny Fondation Telma, 140 ny ankizy voatsabo.
Lasa fahasembanana ho an’ilay zaza ny tongotra mivadika tsy voatsabo ary sakana amin’ny fianarana sy ny asa any aoriana. Tsy fahatomombanana eo amin’ny tongotra hatrany am-bohoka ny mivadi-tongotra ary tsy mbola voafaritra ny antony mitarika izany hatreto.